Hay'adaha: Jooji Cunistaada ee Awoodda Aad Leedahay Links | Martech Zone
Wakaaladaha iyo naqshadeeyayaasha ayaa sida caadiga ah ku dadaala inay ku daraan waxaa suuro galiyay ilaa aasaaska boggaga iyo codsiyada ay dhisaan, laakiin waxaan la yaabanahay inta badan ee aan ka faa'iideysan fursaddaas si ay qaar u helaan raadinta moodada raadinta. Markii aan u sharaxo hagaajinta mashiinka raadinta iyo qiimeynta dadka, waxaan caadi ahaan ugu sharraxaa sidan:
Ku-habboonaynta ereyga-bogga - adoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah si wax ku ool ah boggaaga ayaa kuu siin doonta farriin cad oo ku saabsan makiinadaha wax lagu raadiyo ee ku saabsan shuruudaha aad rabto in boggaagu la xiriiro Waxaan dadka ku dhiirrigelinayaa inay u qoraan waxyaabo ku qasbaya dadka, laakiin waligaa ha iska indha tirin fursadda isticmaalka ereyada muhiimka ah.
Optimization Mashiinka Raadinta bog-ka-baxsan - markii xiriir laga helo bartaada laga helo bogagga ku habboon, ee xoogga leh isla ereyga muhiimka ah, boggaaga ayaa cirka isku shareeraya darajo ahaan. Sida ugu wanaagsan ee boggaga iyo xiriiro badan oo aad haysato, ayaa kaaga sii fiicnaanaya darajadaada.
Intaas oo kaliya maaha arrimaha… aqlaaqda iyo soo noqnoqoshada isbeddelada ku yimaadda mawduucyada la xiriira sidoo kale waa arrin. Si kastaba ha noqotee, labada hab ee kor ku xusan waa kuwa ugu yar ee ay tahay inaad ku darto. Maaddaama laga yaabo inaadan haysan bogag dhammaan shabakadda si aad ugu daabacdo xiriiriyeyaal, waa inaad ka faa'iideysataa golayaasha, shabakadaha bulshada, iyo boggaga macmiilka ee aad haysato!
Haddii macmiilkaagu hore u oggolaanayo a waxaa suuro galiyay xiriir, waxaa jira laba qaab oo aad geyn karto. Haddii ay oggolaan doonaan isku xirnaan dheeri ah, tani waa mid ku habboon:
Waxaa suuro galiyay DK New Media, Wakaaladda Warbaahinta Cusub
Haddii aad u baahato inaad waxoogaa caqli yaraato, adeegso sumadda cinwaanka:
Waxaa awood ku lehDK New Media
Haddii laguu oggol yahay inaad bixiso astaan ​​yar ama sawir leh xiriiriye, ka faa'iideyso qoraalka beddelka ah ee ku jira calaamaddaada ku dheji oo magacaaga u dhig si waafaqsan ereyada muhiimka ah:
Tusaalooyinka kor ku xusan runti waa dhab. DK New Media ayaa hadda ku jira liiska 5-ta ugu sarreysa Google, Bing iyo Yahoo! loogu talagalay wakaaladda warbaahinta cusub, oo hela 1,000 weydiimo baaris bishii. Qaar ka mid ah tan ayaa ugu wacan bogga wax-qabad ee aan sameynay, laakiin in badan oo ka mid ah ayaa ah astaamaha bar-bar-barta ee aan abuurnay.
Tags: qoraalkacinwaanka qoraalka 'ancho'xiriiriyeyaasha hoosetayadoodii xiriiriyeyaashawaxaa suuro galiyayku shaqeeya xiriiriyeyaashaSEO